I-LED Down Light
I-LED Solar Light
I-LED Street Light
I-LED High Bay Light
I-LED Track Light
Ukukhanya Kwephaneli ye-LED
I-LED Ceiling Light
ISIBANI SOKUVIKELA AMEHLO
Njengoba isisho sisho, ezakudala azifi.Ikhulu ngalinye linophawu lwalo oludumile.Namuhla, isibani sokuvikela iso sishisa kakhulu emkhakheni wemboni yokukhanyisa.
Amathrendi amasha embonini yokukhanyisa ngo-2022
Umthelela kulo bhubhane, ukushintshwa kobuhle babathengi, izinguquko ezindleleni zokuthenga, kanye nokukhuphuka kwezibani ezingenangqondo konke kunomthelela ekuthuthukisweni kwemboni yokukhanyisa.Ngo-2022, izothuthuka kanjani?
Ikhaya Elihlakaniphile, Ukukhanyisa Okukhaliphile
Iyiphi impilo ezosilethela i-smart home?Hlobo luni lokukhanyisa okuhlakaniphile okufanele sikuhlomise?
Umehluko phakathi kwe-T5 ne-T8 LED Tubes
Uyawazi umehluko phakathi kwe-LED T5 tube ne-T8 tube?Manje Ake sifunde ngakho!
Izindleko Zezimpahla Zasolwandle Zenyuke Ngo-370%, Ngabe zizokwehla?
Muva nje sizwile izikhalazo eziningi ezivela kumakhasimende: Manje impahla yolwandle isiphezulu kakhulu!Ngokusho kweI-Freightos Baltic Index, kusukela ngonyaka odlule izindleko zempahla zikhuphuke cishe ngama-370%.Ingabe izokwehla ngenyanga ezayo?Impendulo ithi Akunakwenzeka.Ngokusekelwe esimeni samanje sechweba kanye nemakethe, lokhu kukhuphuka kwentengo kuzokwenyukela ku-2022.
Imboni yezibani ze-LED ishaywa wukushoda kwe-Global Chip
Ukushoda kwe-chip okuqhubekayo emhlabeni wonke sekuhlasele izimboni zezimoto nobuchwepheshe babathengi izinyanga, izibani ze-LED ziyashaywa futhi.Kepha imiphumela ebabazekayo yenhlekelele, engase iqhubeke kuze kube ngu-2022.
Kungani ijika le-Planer Intensity ukusatshalaliswa kwezibani zomgwaqo lingafani?
Ngokuvamile, sidinga ukusabalalisa kokukhanya kwezibani ukuze kufane, ngoba kungaletha ukukhanya okukhululekile futhi kuvikele amehlo ethu.Kodwa ingabe uke wayibona ijika le-streetlight planar Intensity distribution curve?Akuwona umfaniswano, ngani?Lesi isihloko sethu namuhla.
Ukubaluleka komklamo wokukhanyisa inkundla
Kungakhathaliseki ukuthi kucatshangelwa kwezemidlalo ngokwayo noma ukwazisa izethameli, izinkundla zidinga isethi yezinhlelo zemiklamo yesayensi nenengqondo yokukhanyisa.Kungani sisho kanjalo?
Ungayifaka kanjani i-streetlight ye-LED?
Lesi sihloko sigxile ekwabelaneni ngezisekelo zolwazi lwamalambu omgwaqo e-LED futhi siqondise wonke umuntu ukuthi afakwa kanjani izibani zomgwaqo ze-LED ukuze ahlangabezane nezidingo.Ukuze sifinyelele umklamo wokukhanyisa umgwaqo, sidinga ukucabangela ngokugcwele umsebenzi, ubuhle nokutshalwa kwezimali, njll izici.Khona-ke ukufakwa kwesibani somgwaqo kufanele kubambe amaphuzu abalulekile alandelayo:
Uyawazi umehluko phakathi kwedrayivu yokuphakela amandla eyodwa kanye nedrayivu engahlukanisiwe?
Ingabe uyazi okwengeziwe mayelana nentengo yezinto ezibonakalayo ze-aluminium eluhlaza?
I-Aluminium enezinzuzo eziningi njengento eyinhloko yezibani ze-LED, izibani zethu eziningi ze-Liper zenziwe nge-aluminium, kodwa inkambiso yakamuva yentengo yezinto ezingavuthiwe ze-aluminium yasishaqisa.
I-Led Lights Basic Parameter Definition
Ingabe udidekile phakathi kwe-flux ekhanyayo nama-lumens?Okulandelayo, ake sibheke incazelo yemingcele yesibani esiholelekile.
UNAYO IMIBUZO NGEMIKHIQIZO YETHU?
Sicela usishiyele umlayezo futhi sizobuyela kuwe NGOKUSHESHA.
D Series I-Solar streetlight - I-Smart ...
© Copyright 20202021 : Wonke Amalungelo Agodliwe.Ukusekela kwezobuchwepheshe: